Rastra Daily | गरिब पहिचानमा राज्यकोषको ७० करोड खर्च, पहिचान भएका गरिबले सुको सहयोग पाएनन्
पहुँचवालाले कार्ड पाए, तर वास्तविक गरिब छुटे ल बोर्ड पनि खारेज भएर मन्त्रालयको शाखामा खुम्चियो कार्यक्रम
देशभरका गरिब परिवार पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने सरकारको योजना आठ वर्षदेखि राज्यकोष दोहन गर्ने बहाना मात्र बनिरहेको छ । त्यसका लागि गठन भएको ‘गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड’ खारेज भएर अहिले यो कार्यक्रम नै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखामा सीमित बनेको छ । बोर्डमार्फत ६२ करोड र बोर्ड खारेज भएपछि आठ करोड गरी राज्यकोषबाट ७० करोड रुपैयाँ खर्च हुनु नै यस कार्यक्रमको एक मात्र उपलब्धि हो ।
हातमा रातो कार्ड,सरकारको सहुलियत शून्य
गरिब पहिचान गर्ने बोर्डमा नेताका नातेदार
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ०६९ मा गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण निर्देशिका जारी ग¥यो । सँगसँगै ‘गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड’ गठन गरियो । स्थापनाताका बोर्ड संयोजक राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख रहने व्यवस्था थियो । तर, ०६९ मै सरकारले निर्देशिका संशोधन गर्दै गरिबी निवारणमन्त्री/राज्यमन्त्री बोर्डको अध्यक्ष रहने व्यवस्था ल्यायो, अनि कार्यकारी उपाध्यक्षमा राजनीतिक नियुक्ति गर्न थालियो । त्यही बिन्दुबाट बोर्डमा राजनीतिक चलखेल सुरु भयो । र, बोर्डको कार्यक्षेत्र रहेका जिल्लामा कम्प्युटर अधिकृतदेखि गणकसम्म राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्ति दिन थालियो ।
बोर्डको पहिलो कार्यकारी उपाध्यक्षमा दुर्गा न्यौपाने भट्टराई नियुक्त भइन् । उनी डा. भट्टराईकै भाइबुहारी हुन् । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार बन्यो । कोइरालाले गरिबी निवारण मन्त्रालय आफैँसँग राखे र कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलका छोरा चिन्तनलाई बोर्डको कार्यकारी उपाध्यक्ष बनाए । कोइराला प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बन्यो । सरकारले असहयोग गरेको बताउँदै बोर्ड उपाध्यक्ष पौडेलले तत्कालीन गरिबी निवारणमन्त्री चित्रबहादुर केसीलाई राजीनामा बुझाए । मन्त्री केसीले आफूनिकटका जनकलाल तिवारीलाई कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त गरे ।
‘गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका–०७५’ मा गरिब पहिचान गर्ने विभिन्न सूचक छन् । परिवारको आकार, शैक्षिक अवस्था, औसत आयु, आम्दानीका स्रोत र आश्रित व्यक्ति, घरको स्वामित्व, छानो र कोठा, पिउने पानी, शौचालय र इन्धनको उपयोग, सवारीसाधन, सञ्चार सुविधा, चौपाया, भौगोलिक बनावट, जातिगत समूह र अन्य सम्पत्तिको आधारलाई गरिब पहिचानका सूचक बनाइएको छ ।
गरिबको सूचीमा नेता नै
बोर्डले २६ जिल्लाका १२ लाख २४ हजार चार सय १७ परिवारको तथ्यांक संकलन गरेको थियो । त्यसमध्ये अतिगरिब एक लाख ८८ हजार दुई सय ३२, मध्यम गरिब एक लाख १९ हजार सात सय ५४ र सामान्य गरिब ८३ हजार आठ सय ४५ परिवार थिए । बोर्डका तत्कालीन कार्यकारी उपाध्यक्ष चिन्तन पौडेलका अनुसार गरिब परिवारको यो सूची ०७२ मै तयार भएको थियो । ‘तर, त्यसपछिको सरकारले गरिबलाई सुविधा दिनै नचाहेका कारण मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएन,’ उनी भन्छन् ।
बोर्डले त्यसपछि दुई वर्षसम्म उजुरी लिने र सूची थपघट गर्नेबाहेक ठोस काम गरेन । मन्त्रिपरिषद्ले १२ साउन ०७४ मा त्यही सूची पारित गर्‍यो र परिचयपत्र वितरण अगाडि बढायो । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्थानीय तहमार्फत नै परिचयपत्र वितरण सुरु भयो । तर, परिचयपत्र गाउँ–गाउँमा पुग्न थालेपछि गरिबको सूचीमा धनीमानी, ठूलाठालु र नेताको समेत नाम परेको सार्वजनिक भएपछि विरोध सुरु भयो । सूचीमाथि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नै प्रश्न उठाए । र, परिचयपत्र वितरण रोकियो ।
‘२६ वटै जिल्लामा सूची र परिचयपत्र पठाएका छौँ, तर वितरण हुन सकेको छैन,’ गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखा प्रमुख झवीन्द्रबहादुर पाण्डे भन्छन् । पाण्डेका अनुसार हालसम्म ५७ हजार चार सय ३१ परिवारले मात्रै परिचयपत्र पाएका छन् । भोजपुर, खोटाङ, रामेछाप, रौतहट, गोरखा, तनहुँ, अर्घाखाँची, बाजुरा, जाजरकोट, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, बर्दिया, अछाम र कैलाली गरी १५ जिल्लामा पहिचान भएका तीन लाख ३४ हजार परिवारले परिचयपत्र पाएका छैनन् ।
गरिब परिवार पहिचान गरिएपछि पाँच वर्षको अन्तरमा पुनरावलोकन गरिने भदौ ०७५ मा कार्यान्वयनमा आएको मौजुदा निर्देशिकामा उल्लेख छ । त्यस आधारमा ०७२ मा गरिब पहिचान भएका परिवारबारे अद्यावधिक गर्ने समय भएको छ । तर, त्यति बेला गरिब पहिचान भएका कतिपय परिवारले परिचयपत्र नै पाएका छैनन्, सुविधा र सहुलियत त टाढाको कुरा । आठ वर्षदेखि सञ्चालित कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म देशभरका गरिब पहिचान नै बाँकी छ ।
बोर्डका पूर्वकार्यकारी उपाध्यक्ष पौडेल जिल्ला तहबाट आएको तथ्यांकमा नेता र धनी परिवारको नाम समेटिएको कुरामा सहमत छन् । भन्छन्, ‘जिल्लाबाट आएको तथ्यांकमा केही गडबडी भएकै हो । कागजमा जे देखियो, त्यही विश्लेषण गरियो, तर अधिकारको दुरुपयोग गरेको छैन ।’
शाखा प्रमुख पाण्डेका अनुसार परिचयपत्र वितरणबारे अहिले कुनै निर्णय भएको छैन । ‘परिचयपत्र वितरणका लागि सबै काम पूरा भएको छ, केही ठाउँमा विरोध भएको हो, तर अहिले सबै ठाउँमा वितरण रोकिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘रोक्ने निर्णय पनि भएको छैन र वितरण पनि भइरहेको छैन ।’ स्थानीय तहहरूले भने यसअघिको गरिब परिवारको सूची यथार्थमा आधारित नभएको बताउँदै अर्को सर्वेक्षण माग गरेका छन् ।
दलहरू गरिबलाई धनी बनाउन चाहँदैनन् : चिन्तन पौडेल, पूर्वउपाध्यक्ष गरिब परिवार सहयोग समन्वय बोर्ड
म १८ महिना बोर्ड उपाध्यक्ष हुँदा भएको काम नै गरिब पहिचानमा हासिल भएको मुख्य उपलब्धि हो । तर, बोर्डलाई प्रभावकारी निकाय बनाउनेभन्दा बढी राजनीति मात्रै गरियो, त्यसैले चाहेजस्तोे काम गर्न सकिएन । राजनीतिक दलहरू गरिबलाई धनी बनाउन चाहँदैनन्, गरिब नै नरहे राजनीति नै सकिन्छ भन्ने त्रास उनीहरूमा छ । २६ जिल्लामा गरिब पहिचानपछि मन्त्रिपरिषद्मा सूची पठाएका थियौँ । तर, तत्कालीन सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाउन दिएन । त्यसैले राजीनामा दिएको थिएँ । हामीले जिल्ला तहबाट कागजातमा तथ्यांक संकलन गरेका हौँ । केही नेता र धनीको नाम समेत समेटिएको यथार्थ हो । घरमूलीले गणकलाई दिएको जवाफका आधारमा फारम तथ्यांक संकलन गरिएको हो ।
गरिबसम्म कार्यक्रम नै पुग्दैनन् : विजन पन्त, कन्सल्ट्यान्ट, डिपार्टमेन्ट अफ इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट, अक्स्फोर्ड विश्वविद्यालय
पञ्चायतकालमा पनि गरिबीको रेखामुनिका नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने कुरा हुन्थ्यो । पछि त्यो धारणामा परिवर्तन गर्ने र विषयलाई नयाँ ढंगबाट हेर्ने भनियो । विश्व बैंक, एडिबीदेखि स–साना गैरसरकारी संस्था पनि यसमा जोडिए । बीचमा अनेक तर्क आए । तर, अहिलेसम्म लक्षित वर्गसम्म गरिबी निवारण कार्यक्रम पुग्नै सकेनन् । प्रधानमन्त्रीसँग कृषि कार्यक्रमले पनि वास्तविक किसान पहिचान गरेर आफ्नो दायरामा समेट्न सकेको छैन । कार्यक्रमहरू फिल्डमा पुग्नुभन्दा बिचौलियाले राज्यको पहुँचमा भएका मानिसलाई प्रयोग गरेर आफूलाई फाइदा पुग्ने हिसाबले परियोजनाहरूलाई सूत्रबद्ध बनाए । प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम पनि राजनीतिक दलकै घेरामा छ । सिंहदरबारसम्म वास्तविक किसानको पहुँच नै छैन । गरिब परिचयपत्र वितरण कार्यक्रममा त झनै राजनीतीकरण भयो । कुनै नेता नजिकका मानिसलाई जागिर खुवाउनकै लागि गरिब पहिचान र परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम ल्याइएकोजस्तो गरियो । प्रशासनिक खर्च नै उच्च भयो, परिचयपत्र बनाउने कुराले व्यापारको रूप पायो । गरिबी निवारण राज्यको पहिलो, दोस्रो प्राथमिकतामा रहिरह्यो, तर सधैँ गरिब नै रहिरहे ।